Soo dejisan Flipboard 4.2.38 – Vessoft
AndroidHab-nololeedkaWararka & WargeysyadaFlipboard
Qeybta: Wararka & Wargeysyada
Bogga rasmiga ah: Flipboard
Flipboard – software ah si aad u eegto in qodobadii xiiso leh iyo horumarkii ugu dambeeyay ee caalamka. Software wuxuu suuragelinayaa in ay doortaan content la doonayo in dib u eegis ka mid ah qaybaha sida ciyaaraha, ganacsiga, sayniska, muusiga, safri iwm Flipboard waa noocyo kala duwan oo qalab ah mawduucyada la xushay oo bixisa si taxadar ah user wararka la xiriira oo xiiso leh oo kaliya. Flipboard kuu ogolaanaya in aad ku xidhi Facebook, Twitter, Instagram iyo shabakadaha kale ee bulshada loo jecel yahay in aragtida ama sarrifka ashyaada kala duwan leh saaxiibadaa. Flipboard sidoo kale awood u leeyahay inuu doorto ilaha wararka si loogu wargeliyo, bedesho font size iyo reserved ogaysiinta ah.
Waxay bixisaa macluumaad la xiriira oo kaliya
Xulashada badan oo qalab ah oo ku saabsan maadooyinka kala duwan
Socodka ah updates ka shabakadaha bulshada caan
Customizes ilaha macluumaadka
Soo dejisan Flipboard
Faallo ku saabsan Flipboard
Flipboard Xirfadaha la xiriira
Google Earth – waa barnaamij soo bandhigaya dusha sare ee meeraha iyadoo la kaashanayo tikniyoolajiyada 3D. Codsigu wuxuu soo bandhigayaa muuqaalka muuqaalka muuqaalka wuxuuna awood u siinayaa inuu qorsheeyo waddo oo uu arko macluumaadka ku saabsan meela kala duwan oo cajiib ah.
Busuu – hab xiiso leh oo lagu barto ama lagu hormariyo aqoonta luqadaha qalaad. Software-ka wuxuu u adeegsadaa aalado waxbarasho oo kaladuwan luqadeedka bilowga ilaa heerarka sare.
ProtonMail – macmiil e-mayl ah oo aan ugu baahnayn macluumaadka isticmaalaha shakhsi ahaaneed ee isdiiwaangalinta oo u adeegsada sirta dhamaadka-dhamaadka dhammeystirka xiriir aamin ah.